काठमाडौँ, भदौ ९–गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) रूसको राष्ट्रीय समन्वय परिषद्को अध्यक्षमा शिव मणि भूर्त्याल निर्विरोध निर्वाचीत भएका छन्। आइतबार रुस स्थित जनमैत्री विश्वविद्यालयको सभाहलमा सम्पन्न साधारणसभाबाट भूर्त्याल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचीत भएका हुन् ।
साधारणसभाले उपाध्यक्षमा सुमन रिजाल, गोविन्द आचार्य, केशव तिमिल्सिनालाई चयन गरेको छ । साधारणसभाबाट महासचिवमा इन्द्र भुषाल, कोषाध्यक्षमा किरण राणाभाट, सचिवमा शन्देश सिम्खडा, युवा संयोजकमा मिलन कट्टेल ‘सिताराम’ महिला संयोजकमा विद्या थापा निर्वाचीत भएका हुन् ।
समितिको कार्यकारी सदस्यहरुमा हिमाल खनाल, पशुपति घिमिरे, दुर्गाबहादुर भट्टराई, यामबहादुर थापा, रामबाबु पाण्डे निर्वाचीत भएका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा एक नारायण चापागाइँ चयन भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
अध्यक्ष पदका आकांक्षीहरु शिव मणि भूर्त्याल, डा. विमला भण्डारी र सुमन रिजाल बिच सहमति भएपछी भूर्त्याल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचीत भएका हुन् ।
भूर्त्याल ३३ बर्ष अघि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि रूस गएका थिए । उच्च शिक्षा पश्चात् व्यापार/व्यवसाय गर्दै आइरहेका भूर्त्याल गैर आवासीय नेपाली संघको स्थापना कालदेखिनै विभिन्न भुमिकामा सक्रिय हुँदै आएका छन् ।
नवनिर्वाचीत पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा कार्यकारी सदस्यहरुलाई निर्वाचन आयुक्त कुमार कार्कीले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए भने केन्द्रीय उपाध्यक्ष सपिला राजभण्डारी पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
साधारणसभामा रुसका लगी नेपाली राजदूत ऋषि राम घिमिरे, केंद्रीय महासचिव डा. बद्री केसी, केन्द्रीय उपाध्यक्ष सपिला राजभण्डारी, यूरोप उप–संयोजोक गोविन्द गौतम, केन्द्रीय सदस्यहरू रविन्ंद्र भट्टराई, एकनारायण चापागाइँ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालकी चर्चित गाईका सुशीला गौतमको समेत प्रस्तुति रहेको थियो ।
अष्ट्रेलीया भनेर इन्डोनेसीया पुर्याउने ६ जना पक्राउ
नेपाली सेनाको ६ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट